Maulik Patel Maqaalkiisii Martech Zone |
Maqaallada by Maulik Patel
Algorithm-ka Google wuu is badalayaa waqti waxaana u sabab ah shirkadahaan in lagu qasbay inay dib uga fikiraan istiraatiijiyadooda SEO. Mid ka mid ah ficillada muhiimka ah ee lagu kordhinayo darajada ayaa ah ololaha dhismaha isku xirka ay ka kooban tahay. Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay xaalad halkaas oo kooxdaada SEO ay si adag u shaqeeyaan si ay ugu diraan emayl wacyigelin daabacayaasha. Kadib, qorayaashaadu waxay si gaar ah u abuuraan nuxur. Laakiin, toddobaadyo yar ka dib markii ololuhu bilaabmay, waxaad ogaatay inaysan helin wax natiijo ah. Waxaa jiri kara lambar